ikhaya/umcebisi/Imemori ezi-5 ezilungileyo (i-RAM) eyi-16 GB xa kuthelekiswa
I-RAM DDR4-RAM (2020) RAM kuvavanyo
Vangelis22. October 2020
Imemori emi-5 elungileyo (RAM) eyi-16 GB yesantya somsebenzi ongaphezulu kwenkqubo yakho ngokuthelekisa. Ewe, wonke umsebenzisi wekhompyuter ufuna ukuba inkqubo yakhe isebenze ngokukhawuleza kwaye ke zonke iinkqubo kufuneka ziqale ngokukhawuleza. Wonke umsebenzisi ulindele ukuba ikhompyuter yakhe isebenze ngesantya esiphezulu apho iinkqubo zomsebenzi zenziwa ngokukhawuleza kwaye ngaphandle kokulibazisa.
1 imemori yokufikelela ngokungacwangciswanga
2 Imemori ezi-5 ezilungileyo (i-RAM) eyi-16 GB xa kuthelekiswa
3 Impindezelo yeCorsair RGB PRO
4 Corsair Impindiselo LPX
5 Ubuchule be-AEGIS F4-3000C16D
6 Umdlalo obalulekileyo weBallistix LT
7 IHyperX HX432C16PB3AK2
8 Yintoni i-RAM-Yintoni imemori ye-RAM?
9 Zeziphi iintlobo zememori ezikhoyo?
10 Iimodyuli ze-SDRAM
11 Iimodyuli zeDDR RAM
12 Iimodyuli ze-RAM ze-DDR2
13 Iimodyuli ze-RAM ze-DDR3
14 Iimodyuli ze-RAM ze-DDR4
15 Izinto eziluncedo kunye nokungalunganga kweemodyuli zememori
16 Kuya kufuneka unikele ingqalelo koku xa uthenga i-RAM
17 Faka i-RAM
18 Faka i-RAM kwiLaptop
19 Iingcebiso zememori kunye namaqhinga
20 Yimalini i-RAM esimahla?
21 Uvavanyo lwe-RAM
22 Uvavanyo lwe-RAM ngezixhobo ezisemgangathweni zeWindows
23 Jonga imemori ngesixhobo se-QuickMemoryTestOK
24 RAM engenanto
imemori yokufikelela ngokungacwangciswanga
Ukongeza ngokukhawuleza Inkqubo yeCPU enye I-SSD hard driveI-RAM idlala indima enkulu ekusebenzeni kwekhompyuter yakho. Ukuya phezulu ukwenza Nangona kunjalo, akunyanzelekanga ukuba uthenge ikhompyuter entsha kwangoko. Hayi, unokhetho kwimemori yokusebenza, ebizwa njalo i-ram Ukwandisa inkqubo yakho.
Ezona 5 zilungileyo Imemori yokuFikelela ngokuRhoqo (RAM) I-16 GB yesantya esingaphezulu somsebenzi wenkqubo yakho ngokuthelekisa. Wonke umntu osebenza kwikhompyuter ufuna ukuba inkqubo yakhe isebenze ngokukhawuleza. Ukuze iinkqubo ziqale ngokukhawuleza kwaye iinkqubo zomsebenzi zenziwa ngokukhawuleza ngokukhawuleza.
Ukongeza ngokukhawuleza Indawo yenkqubo ye-CPU kunye SSD-Hard drive, RAM idlala indima enkulu. Akunyanzelekanga ukuba uthenge ikhompyuter entsha kwangoko. Unenketho yokwandisa ngememori ephambili (RAM). Sifuna wena apha, i-5 engcono I-16 GB RAM ukwazisa.
Ngeyethu Umcebisi weMemori Singathanda ukukunika ukhetho lwe Eyona RAM kwaye ndikuncede kwisigqibo sakho sokuthenga. Apha ngezantsi sibonisa 5 eyona 16GB ye-RAM ngaphambili.
Icebiso: ezinye iimveliso zekhompyuter ngokuthelekisa, e. B. I-SSD hard drive
Impindezelo yeCorsair RGB PRO 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz C16 XMP 2.0 Enthusiast RGB LED Lighting Memory Kit - Mnyama
Impindezelo yeCorsair LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz C16 XMP 2.0 Performance High Desktop Memory Kit, Emnyama
Skill AEGIS F4-3000C16D-16GISB Imemori 16GB DDR4 (2x8GB)
I-Crucial Ballistix Sport LT BLS4K4G4D240FSC imemori yokudlala yememori kwikhithi (2400 MHz, DDR4, DRAM, 16GB (4GB x4), CL16) emhlophe
IHyperX Predator HX432C16PB3AK2 / 16 inkumbulo 3200MHz DDR4 CL16 DIMM XMP 16GB (2x8GB) RGB
Imemori ephambili yeMHz
Ukalisho loMthengi kwiAmazon
Thenga it e-Amazon
Impindezelo yeCorsair RGB PRO
Ukulungiswa kokusebenza okuphezulu kwi-Intel nakwi-AMD DDR4 motherboards. Iitshipsi zememori ezivavanywe ngononophelo ziqinisekisa ukubanakho ukugqithisa okuphezulu
Ngesoftware yeCorsair iCUE, ungalawula kwaye uvumelanise i-10 nganye elawulekayo, eqaqambileyo ye-RGB ye-RS kwimodyuli nganye kunye nezinye iimveliso zeCorsair RGB, kubandakanya iicooler CPU, iibhodi yezitshixo kunye nabalandeli
der Impindezelo RGB Pro 16 GB yinkampani yememori iCorsair. Icela ukusebenza okuphezulu kwazo zonke iibhloko zee-Intel kunye ne-AMD DDR4. Impindezelo RGB pro ixhaswa yiGigabyte RGB Fusion kunye neMSI Mystic Light. Ngenkxaso yeXMP 2.0, ungasebenzisa useto olunye kwi-BIOS ukuseta owona msebenzi mhle wokusebenza ngokukuko
Imemori ephambili ihanjiswa kunye I-16 GB kwi (2x8GB) ine-MHz engama-3200
Corsair Impindiselo LPX
Imodyuli nganye yeempindezelo ye-LPX inee-aluminium heatsreaders zokuhambisa ngokukhawuleza ubushushu kunye nokusebenza okupholileyo
Ifumaneka ngemibala eyahlukeneyo ukutshatisa ibhodi yakho yomama, izinto zakho okanye isitayile sakho
Impindezelo LPX Ukusuka eCorsair lolona thelekiso lubiza ixabiso eliphantsi. Okwangoku ixabisa malunga ne- € 65 kwaye yahlulwe yaziimodyuli ezimbini 2x8GB zisiwe. Ye DDR4 unayo 3000 MHz ilungiselelwe i-Intel x299, i-Z390, i-Z370 kunye ne-H370 yee-motherboards. Imemori ye-VENGEANCE LPX yenzelwe ngokukodwa ukugqithisa ngamandla.
Ubuchule be-AEGIS F4-3000C16D
Uhlobo: DDR4 DIMM 288-pin
Imodyuli: 2x 8GB
Die G.Skill yinkampani eyaziwayo kakhulu ngokubhekisele kwimemori. Emelwe kwimarike eneenkumbulo ezininzi ezahlukeneyo. Skill AEGIS F4-3000C16D ziinkumbulo ze-eDDR4 ngeDIMM 288-iPini kunye Qaphela i-1.35V. Ngale modeli, nayo, imithetho emibini ene-8 GB nganye ihanjiswa kunye.
Umdlalo obalulekileyo weBallistix LT
Ilungele abadlali beqonga kunye nabathanda ukusebenza
Ukusasaza ubushushu kwidijithali kwimbonakalo ye-camo, efumaneka ngombala omhlophe, ngwevu nobomvu
Ekuthelekisweni kwethu sisenayo loo nto Umdlalo obalulekileyo weBallistix LT Imveliso ye- with 4 × 4 GB ihanjisiwe. Zombini Ikhithi yokugcina yenye yeemodeli ezine ezine 2400MHz. ezilungele abadlali kunye nokusebenza. Yi-DIMM engafakwanga nto. Iyahambelana nomgangatho we-DDR4 UDIMM yomzi mveliso ononxibelelwano lwe-288 kwaye iyahambelana neenkqubo ze-Intel kunye ne-AMD.
Itekhnoloji ye-HyperX ye-infrared Sync
Umtsalane we-RGB ukukhanyisa ngesitayile esinesibindi¹
3200 MHz ibonelela nge IHyperX HX432C16PB3AK2 Iimodyuli zememori. I-16 GB ye-RAM (2 × 8 GB) Isantya esiphezulu, ukusebenza kade. Ngakumbi nge-Intel Ukulungela i-XMP Prilungiselelwe amaqonga eIntel akutshanje. Umvelisi ukwabonelela nge-8 GB, 16 GB, 32 GB kunye ne-64 GB (4 × 16 GB).
Yintoni i-RAM-Yintoni imemori ye-RAM?
Abanye abasebenzisi bekhompyuter banokubhekisa kwikota ye-RAM okanye imemori yokufikelela ngokungacwangciswanga ungenzi nto, ke singathanda ukubhala inkcazo emfutshane yoku ukuze sivale naziphi na izithuba kulwazi lwethu.
Imemori ephambili ikwabizwa ngokuba yimemori ye-RAM, okt imemori yokufikelela ngokungacwangciswanga. Imemori ye-RAM, oko kukuthi, imemori yexesha elifutshane lekhompyuter. Logama ikhompyuter yakho isebenza, idatha yakho iya kugcinwa.
Nangona kunjalo, ngako konke ukuqala kwakhona koku "Imemori yexesha elifutshane lekhompyuter" kuphelile.
Imemori ephambili yenye yezona zinto zibaluleke kakhulu kwikhompyuter. Sisiseko sokusebenza kwesantya sekhompyuter, okt ngokukhawuleza idatha ingaqwalaselwa. Okwangoku, abavelisi abaninzi bavelise ii-RAM ezahlukeneyo, ezingasenzi sigqibo xa ukhetha i-RAM ngokulula. Ngokuchasene noko, kuba ayizizo zonke ii-memory bar ezihambelana nazo zonke iibhodi eziphambili.
Ngale yangoku Ibha ye-DDR4 abanye abavelisi banikezela ngeziqinisekiso ukuya kuthi ga kwiminyaka eli-10. Ke ukuthenga i-RAM elungileyo sisisombululo esisekwe kwixesha elizayo sokwandisa ikhompyuter yakho.
Zeziphi iintlobo zememori ezikhoyo?
Njengazo zonke izixhobo zobuchwephesha, ii-RAM ezikhoyo ziyaqhubeka ukuphuhliswa, ukuze inani leemodyuli ezahlukeneyo ze-RAM ezinamagama amatsha ngoku ziyafumaneka kwintengiso.
Iimodyuli zeDDR RAM
Iimodyuli ze-RAM ze-DDR2
Iimodyuli ze-RAM ze-DDR3
Iimodyuli ze-RAM ze-DDR4
Iimodyuli ze-SDRAM zinkumbulo ezindala kakhulu ezinesakhono sokugcina i-16, 32 okanye i-64 megabytes. Ezi azifumaneki kule mihla kuba azinakusetyenziswa kwiinkqubo ezintsha. Iinkumbulo ze-SDRAM ngoku zinomdla kuphela kubaqokeleli.
Kwimeko yenkumbulo ye-DDR (inqanaba ledatha ephindwe kabini), ezona zihlaziyiweyo zezi Iimodyuli ze-DDR4. Kwixesha elizayo eliseduze iimodeli ze-DDR5 ziya kufikelela kwintengiso.
Imemori yokuqala ye-DDR yathengiswa ukusuka ngo-2002. Xa kuthelekiswa neemodyuli ze-SDRAM ezindala, ukunyuka okukhulu kwesantya kunokugqitywa. Babenomthamo wokugcina 256 MB, 512 MB, 1.024 MB, 2 gigabytes kunye nesantya se I-megahertz ezingama-400. Iimodyuli zokuqala ze-DDR RAM nazo azisetyenziswanga namhlanje, ukuba kunjalo kuphela kwiikhompyuter ezindala.
Iimodyuli ze-DDR2 zinendawo yokugcina ye 1, 2 okanye 4 GB. Babedume kakhulu okwethutyana kuba basonyusa kakhulu isantya sekhompyuter. Iibhodi zomama ezixhasa le nkumbulo azisafumaneki okanye azisenziwa.
Kude kube ngo-2014 babenjalo Iimodyuli ze-DDR3 RAM, eyomeleleyo kwintengiso de babuyiselwa imemori ye-DDR4. Umthamo wokugcina wawuyi-4 kunye ne-16 ye-gigabytes kwaye isantya sewotshi sasiphakathi kwe-800 kunye ne-2.000 3 megahertz. Umahluko omkhulu kwimemori endala. I-DDRXNUMX RAM yayikhethwa ngabadlali ngokukodwa. Imidlalo iye yafuna ngakumbi nangakumbi kwaye ke ifuna imemori engaphezulu.
Imemori yangoku ziimodyuli ze-RAM ze-DDR4. Ixesha lewotshi liphakathi kwe-1.600 kunye ne-3.200 okanye i-4000 megahertz kwaye zinokugcinwa kwe-4, 8, 16 okanye i-32 gigabytes. Ii-RAM zicetyiswa kuzo zonke iikhompyuter zale mihla.
Izinto eziluncedo kunye nokungalunganga kweemodyuli zememori
Iimodyuli ze-RAM ze-DDR4 zangoku zithathe indawo yeemodyuli ze-RAM ze-DDR3. Kodwa ukutshintshela kwisizukulwana esitsha se-DDR4 akunazibonelelo kuphela kodwa kukwanokungalunganga. Nangona i-DDR4 RAM ikhawuleza kakhulu kunezizukulwana ezidlulileyo, i-DDR3 RAM ihlala inexabiso eliphantsi ukuthenga. Ukongeza, azinakusetyenziswa nge-CPU nganye kunye nebhodi ephambili.
Ke ngoko, umbuzo uphakama malunga nokuba uya kuyandisa nini i-RAM.
Ukuba ikhompyuter inenkumbulo eninzi, ngokufanayo inamandla ngakumbi. Kodwa kufuneka nini ukuphucula ikhompyuter yakho nangaphezulu kwe-RAM? Uphuculo olunengqiqo kufuneka lwenziwe xa ikhompyuter ifikelela kwimida yokusebenza kwayo.
Ukufumanisa ukuba ikhompyuter yakho isebenza kwimida yokusebenza kwayo, ungakujonga oku kwi Windows Task Manager. Vula uMphathi woMsebenzi ngokudityaniswa kweqhosha Ctrl + Del kwaye ucofe ukusebenza phezulu. Kulapho ukujonga ukusebenza kwekhompyuter yakho kunokufumaneka khona. Jonga ukusebenza kwe-RAM njengoko usebenza.
Ngexesha lomsebenzi weofisi oqhelekileyo, i-RAM akufuneki ixakeke kakhulu, kodwa ngomsebenzi wokusebenza okuphezulu, njengokuhlela ividiyo, ukusetyenziswa kwamandla kwekhompyuter kuhlala kuluhlu oluphezulu. Ke ngoko, ukusetyenziswa kwe-approx. 90-100% inokuthathwa njengesikhokelo sokuphucula inkumbulo ephambili.
Ngokwandisa imemori yakho ephambili, uya kuyonyusa ukusebenza kwekhompyuter yakho.
Ingozi: Ukuphucula indawo yakho yokugcina akusoloko kufanelekile!
Ukuba imemori ephambili ayisetyenziswanga ngokupheleleyo, ukwandisa imemori ephambili akuyi kukuzisela nto Ukwanda kwesantya. Cinga malunga nokuba ungathanda ukuchitha imali yakho kwi-SSD ekhawulezayoihadi diski ufuna ukutyala imali, njengoko uqinisekisiwe ukufumana ukonyuka kwesantya ngayo.
Gcina izixhobo zakho zintsha Abaqhubi bahlaziyiwe. Kuya kufuneka uqhubeke uhlaziya ibhodi ephambili kwaye ufake umqhubi wamva nje kunye nohlaziyo lweBIOS, hayi ngenxa yezizathu zokhuseleko kuphela. Umqhubi webhodi yomama wangoku unokufumaneka kwiwebhusayithi yomenzi.
Kuya kufuneka unikele ingqalelo koku xa uthenga i-RAM
Ufuna ikhompyuter yakho ibenayo entsha Ukuphucula i-RAM okanye ubeka ikhompyuter entsha? Ngaphandle kwetyala apho ufuna ukufaka inkumbulo entsha, kukho izinto ezimbalwa ekufuneka uziqwalasele ngaphambi kokuthenga imemori.
Kubaluleke kakhulu ukufumanisa kwangaphambili ukuba yeyiphi i-RAM yebhodi yomama ehambelana nayo, luhlobo luni lwe-RAM kunye nelona zinga liphezulu lewotshi elifanelekileyo kwikhompyuter yakho. Fumana ngakumbi kumenzi okanye jonga kwimiyalelo yokusebenza.
Ngamanye amaxesha kulunge ngakumbi ukusebenzisa iintonga ezininzi ze-RAM, kuba enkosi ekusebenzeni kwejelo ezimbini, imivalo emibini ye-8 GB ye-RAM inokukhawuleza 16 GB Imemori.
Enye ingongoma ebalulekileyo yi-megahertz. Soloko usebenzisa ezifanayo Megahertzxa usebenzisa iinkumbulo ezininzi. Kwi-megahertz ezahlukeneyo, imivalo ayinakho ukuhambisa ukusebenza kwabo ngokupheleleyo.
Ukufakwa kwe-RAM ngqo. Cima ikhompyuter. Oku kubaluleke kakhulu.
Ukuba kukho imfuneko, susa imemori yakudala ngokukhulula izixhasi ezincinci zokuphepha esiporweni. Ubukhulu becala ziyafumaneka ngemibala engwevu okanye iorenji. Susa ngononophelo imemori yakudala.
Ngoku faka imemori entsha kwaye uyicinezele kakuhle ude uve unqakrazo. Le kuphela kwendlela yememori yokunxibelelana nebhodi ephambili. Layita ikhompyutha. Ukuba awuva naziphi iithowuni ngexesha lokuqalisa, emva koko wenze konke ngokuchanekileyo.
Kwi-bios ungajonga ukuba imemori yamkelwe ngokuchanekileyo nokuba i-megahertz iyaboniswa. Ungangena kwi-BIOS ngokucinezela isitshixo sokucima ngelixa ikhompyuter yakho iqala.
Faka i-RAM kwiLaptop
Ukufakwa kwememori ephambili kwilaptop kuyafana naleyo ikwi-desktop yePC. Nceda uqiniseke ukuba indawo ye-RAM incinci. Ezinye iinkumbulo zisetyenziswa kwiilaptops. Unokufumana ulwazi oluthe kratya malunga nendlela yokugcina yogcino kwimiyalelo yokusebenza.
Iingcebiso zememori kunye namaqhinga
Yimalini i-RAM esimahla?
Ungahamba kunye 10 Windows fumana ukuba ingakanani imemori (RAM) esetyenziswayo ngoku. Ufumana isishwankathelo sevolumu yememori. Ukwenza oku, kuya kufuneka uvule uMphathi woMsebenzi. Oku kuyenziwa ngcono kusetyenziswa indibaniselwano yesitshixo Ctrl + Alt + Del. Cofa phantsi kwethebhu amandla kwimemori.
Ukuba ufuna ukubona ukuba zeziphi iinkqubo kunye neenkqubo ezithatha indawo yokugcina, cofa kwifestile enye ephezulu "Iinkqubo". Unokusebenzisa isixhobo esincinci I-RaMMap cebisa. Olu luhlu lubonisa zonke iinkqubo ngokweenkcukacha.
Kukho iinkqubo ezahlukeneyo kwi-Intanethi onokuzisebenzisa ukuvavanya i-RAM yakho. Imemori ephambili enesiphene ikunika ukuqala kwakhona ngesiquphe okanye rhoqo kwizikrini eziluhlaza. Kuphela kukuphononongwa kwebar yakho yememori onokukunika ukuqiniseka okuqinisekileyo.
Uvavanyo lwe-RAM ngezixhobo ezisemgangathweni zeWindows
KwiWindows 10, ungasebenzisa eyakho Vavanya imemori ye-RAM.
Chwetheza kwibar yokukhangela "Ukuchongwa kwememori" a. Cofa kwisiphumo Msgstr "Uxilongo lweememori yeWindows".
Jonga ikhompyuter yakho kwiingxaki zememori.
Iingxaki zememori zinokubangela ukuba ikhompyuter ilahle idatha okanye iyithintele ekusebenzeni kakuhle.
Qala kabusha ngoku kwaye ujonge iingxaki (kuyacetyiswa)
Gcina idatha yakho kwaye uvale naziphi na iinkqubo ezivulekileyo ngaphambi kokuqalisa kwakhona.
Jonga iingxaki kwixesha elizayo xa uqala ikhompyuter yakho.
Khetha inqaku 1. Ikhompyuter iya kuvalwa.
Imemori nge Isixhobo se-QuickMemoryTestOK khangela
Khuphela oko Inkqubo kwiwebhusayithi yomenzi khuphela kwaye uyiqhube.
Yonke eyakhelwe-ngaphakathi kwi-RAM yamkelwe.
Phezulu, cofa "Jonga ngoku". Inkqubo iqala ukuvavanya iinkumbulo. Emva kwethutyana ungasibona isiphumo.
Ngaphambi kokuqhubela phambili, kufuneka uyazi ukuba akusoloko kucetyiswa ukukhupha imemori ye-RAM. Kufuneka kuphela kwiimeko ezinqabileyo kakhulu. IWindows, i-CPU kunye nememori zihlala zizenza ngokwazo.
Akukwacetyiswa ukuba kusetyenziswe iinkqubo zokucwangcisa ezifana ne-RAM Booster. Endaweni yoko, unokuqinisekisa ukuba kukho imemori eyaneleyo ngokwakho. Susa okungafunekiyo Iinkqubo zokuzimela ngokuzenzekelayokuba zilayishwe ngasemva ngexesha lokuqalisa kwaye zithatha imemori engeyomfuneko.
Unxibelelwano lwefiber optic - sisiphi isantya
Iwindows vs.MacOS vs Chrome OS: Zithini iinkampani ezikhetha ukusebenza nazo?
Ngokukodwa yandisa umqondiso ovela kwi-WLAN-ekugqibeleni uluhlu ngakumbi
NgoLwesihlanu oMnyama: olona suku lubalaseleyo kubathandi betekhnoloji kunye nemidlalo
Kwi-Intanethi ekhuselekileyo: Yeyiphi indlela ebalaseleyo yokuhamba ngeFacebook kunye neCo?
I-ISO kwi-USB stick - izixhobo ezi-3 ezisimahla
Imithetho ebalulekileyo yokhuseleko lwe-IT
Ukhuseleko: Khusela ubumfihlo kunye nomxhasi weVPN
Sebenzisa i-Bing njenge-niche kwintengiso yeinjini yokukhangela
Iziseko zophuhliso lwesoftware
Sisebenzisa ikuki kwiwebhusayithi yethu. Ezinye zazo zibalulekile, ngelixa ezinye zisinceda ukuphucula le webhusayithi kunye namava akho. Ukuba ungaphantsi kweminyaka eli-16 kwaye ufuna ukunika imvume yakho kwinkonzo yamavolontiya, kufuneka ucele imvume kumgcini wakho osemthethweni. Sisebenzisa iikuki kunye nobunye ubuchwepheshe kwiwebhusayithi yethu. Ezinye zazo zibalulekile, ngelixa ezinye zisinceda siphucule le webhusayithi kunye namava akho. Idatha yobuqu inokucutshungulwa (umzekelo, iidilesi ze-IP), umz. B. yeentengiso ezenzelwe wena kunye nomxholo okanye intengiso kunye nomlinganiselo womxholo. Unokufumana ulwazi oluninzi malunga nokusetyenziswa kwedatha yakho kwinqaku lethu yemfihlo. Unokwenza ukhetho lwakho nangaliphi na ixesha phantsi izilungiselelo rhoxisa okanye uhlengahlengise.
Ukuba ungaphantsi kweminyaka eli-16 kwaye ufuna ukunika imvume yakho kwinkonzo yamavolontiya, kufuneka ucele imvume kumgcini wakho osemthethweni. Sisebenzisa iikuki kunye nobunye ubuchwepheshe kwiwebhusayithi yethu. Ezinye zazo zibalulekile, ngelixa ezinye zisinceda siphucule le webhusayithi kunye namava akho. Idatha yobuqu inokucutshungulwa (umzekelo, iidilesi ze-IP), umz. B. yeentengiso ezenzelwe wena kunye nomxholo okanye intengiso kunye nomlinganiselo womxholo. Unokufumana ulwazi oluninzi malunga nokusetyenziswa kwedatha yakho kwinqaku lethu yemfihlo. Unokwenza ukhetho lwakho nangaliphi na ixesha phantsi izilungiselelo rhoxisa okanye uhlengahlengise. Apha unokufumana isishwankathelo se cookies ezisetyenzisiweyo. Unganika imvume yakho kuwo onke amacandelo okanye ufumane ulwazi oluthe kratya luboniswe kwaye ke ukhethe ii-cookies ezithile.